Akụkọ - nkwado UL – BlackShields DC kwadoro ikuku ikuku gafere asambodo UL
BlackShields nwere obi ụtọ ịkpọsa na ụdị 2 nke DC kwadoro Cabinet Air conditioner nke ahaziri maka onye ahịa US gafere nkwado UL. Mgbe ọtụtụ ule na nyocha gasịrị, The Underwriters Laboratories bịanyere aka na nkwado UL maka ụdị 2 nke ikuku ikuku DC.
Anyị na-anya isi na DC kwadoro Air conditioner nwere nhazi njikwa gụnyere onye njikwa, DC Compressor ọkwọ ụgbọ ala na nchekwa ọkụ nke bụ R&D nke BlackShields. Nke a pụtara na BlackShields nwere ike ịnye ikuku ikuku DC dị iche iche na nkwado UL na arịrịọ ndị ahịa.
BlackShields na-arụpụta DC cabinet Air conditioner nke a na-ejikarị na saịtị Telecom na-enweghị ike grid ma ọ bụ iji ngwakọ ike ọkọnọ.
Igwe ikuku DC nwere Ezi DC kwadoro compressor (enweghị inverter) yana ndị na-akwado DC nke nwere ike ịhazigharị ọsọ dabere na arịrịọ jụrụ oyi na kabinet. Ike ọkọnọ nke DC kwadoro kabinet Ikuku bụ -48V nke nwere ike na-agba ọsọ site na batrị na saịtị. The DC compressor nwere ike ibido nwayọọ ka ịzena inrush ugbu a imebi generator.
BlackShields na-enye DC powered cabinet Air conditioner (ike jụrụ oyi site na 300W ruo 4000W) maka ngwa dị iche iche.
Oge nzipu: Jul-29-2021